Gawaari Sida Deeq raashiin ah oo gaaray degmada Qoryoleey iyo shacabka oo weli loo qeybin. – idalenews.com
Gawaari Sida Deeq raashiin ah oo gaaray degmada Qoryoleey iyo shacabka oo weli loo qeybin.
Wararka naga soo gaaraya degmada Qoryooleey gobolka Sh.hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in shalay halkaasi ay gaareen gawaari siday deeq raashiin ah oo loogu tala galay dadka deegaanka.
Deeq raashiinka ah oo ay xukuumada Federaalka Soomaaliya ka dirtay magaalada Muqdisho ayaa ka timid wadamada deeq bixiyaasha kuwaasoo ugu tala galay in loo qeybiyo dadka degan goobihii dhawaan laga qabsadey xoogaga Alshabaab.
Deeqdaan ka koobanayd dhowr gawaari ayaa waxaa si toos ah loo geeyay xarunta degmada Qoryooleey halkaasi oo lagu wado in sedax meelood labo meel ay reebtaan maamulka ka jira halkaasi.
Shacabka degmada Qoryooleey oo dhawaan hantidooda ka bililiqeysteen ciidamada Dowlada ayaa hadane lagu wadaa in laga leexsado macaawinadii loogu tala galay in loo qeybiyo dadka deegaanka oo dhibaato badan ka soo gaarta dagaalkii ka dhacay halkaasi.
Inta badan dadkii ku noolaa Qoryooleey ayaa iskaga soo barakacay deegaankoodii kuwaasoo nolol xumo soo foodsaartay kadib markii xoolahoodi iyo beerahoodi baabi’iyeen madaafiicdii ay isku adeegsanaayeen labada garab ee ku dagaalmay halkaasi.
Idale News Online, Qoryooley.
Dagaall Goor dhow ka Bilowday DuLeedka Magaalada Kismaayo
Nin Soomaali ah oo qirtay in uu Al Shabaab yahay oo Maxkamad la soo taagay (Daawo Sawirada).